Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo qabatay tababar ku saabsan kor u qaadista aqoonta kormeerayaasha Wasaaradda. – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo qabatay tababar ku saabsan kor u qaadista aqoonta kormeerayaasha Wasaaradda.
By editor	/ October 21, 2017
21/10/ 2017- Shirkaas oo socday mudo dhan 5 casho ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay kormeerayaasha gobolada iyo degmooyinka iyo shaqaalaha xarunta dhexe ee Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland.
tababarka ayaa waxa uu ku saabsanaa tayaynta waxbarashada iyo tacliinta sare, waxaana ugu horeyn ka hadlay Agaasimaha waaxda tayaynta iyo tayadhowrka wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare Mudane C/qaadir Yuusuf Nuux wuxuuna sheegay in tababarkaan ahmiyad gaar ah u leeyahay tayaynta waxbarashada iyo ka warqabka agabka waxbarashada ee degaanada Puntland.
Mudane Nuux ayaa sheegay in ujeedada tabaabarku yahay qodobada hoos kuxusan:
Kor uqaadista aqoonta kormeerayaasha waxbarashada.
Mideynta agabka loo isticmaalo kormeerada gobolada.
Soo saarista hal form oo ka kooban dhamaan qodobada lagu kormerayo Dugsiyada waxbarasho.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Mudane Maxamed C.qaadir Cismaan ayaa la dardaarmay dhamaan kasoo qaybgalayaashi tababarkaan wuxuuna ku adkeeyey in la hubiyo tayada looga baahanyahay waxbarashada Puntland, lana joogteeyo kormeerada waxbarashada dhamaana deganada Puntland.
Barnamijkaan ayaa qayb wayn ka ahayd hay’adda AET Waxaana Masuuliyiinta Hay’adda AET balan qaadeen inay joogtaynayan Tababarada noocan ah.